Abaculi asebemnkantshubomvu baphawula ngolukaBabes Wodumo | News24
Abaculi asebemnkantshubomvu baphawula ngolukaBabes Wodumo
Durban - Bathi uSathane uyachanasa eWestInk, uyaziginqikela nje. UMampintsha, ogama lakhe langempela nguMandla Maphumulo, ongumnikazi wale nkampani uthi "uSathane ushaya ama-fall" kule nkampani.
Usho lokhu uMpampintsha ngesikhathi le nkampani ihlangene nabezindaba ngoLwesihlanu ntambama, lapho iWestInk ibicacisa khona ngobuhixihixi okugcine kuletha okukhulu ukuphoxeka kuBabes Wodumo njengoba engakwazanga ukuya emcimbini osezingeni eliphezulu eLos Engeles, e-United States of America (USA), ama-BET Award.
UBabes ubeqokwe emunxeni we-Best International Act: Africa, ancintisana nabanye abaculi base-Afrika okubalwa kubo nababili baseNingizimu Afrika u-AKA, noNasty C.
OLUNYE UDABA:Siyaxolisa kakhulu, kusho uMampintsha ngolukaBabes
Ixolisile iWestInk ngabo bonke ubuhixihixi obuholele ekutheni uBabes angayitholi iVisa, yasho ukuthi isiqashe nenkampani ezobhekelela izindaba zayo (WestInk), ukuze kugwemeke amaphutha afana naleli elenzekile.
Nakuba uBabes engenasikhathi esingakanani efikile endimeni yezikaqedisizungu kodwa kuningi kakhulu osekumehlele nosekwenzekile empilweni yakhe. Nokukhuluma futhi sekukuningi njengoba abanye bethi kumele aphume ngaphansi kweWestInk, athole inkampani ezomphatha kahle, izinto zakhe zihambe ngendlela eqondile.
Nokho kuso lesi sithangami sabezindaba sakamuva ukubeke kwacaca ukuthi yena uyofela eWestInk. Naye uMampintsha ukubeke kwahlala obala ukuthi ngeke aze amdedele uBabes, wathi labo abamgaqele mabakhohlwe. Uthe uBabes usefana nengane yaseWestInk.
Nabanye abaculi bazwelana noBabes ngokumehlele.
U-Arthur Mafokate owaziwa kakhulu ngeleKing of Kwaito ubabaza ibhadi nefu elimnyama elisibekele le ntandokazi.
"Ingizwisa ubuhlungu into eyenzeka kuBabes, ikakhulu ngoba ucula ikwaito. Kuyo yonke into ayenzayo kuhlala kunamabhadi. Angazi, mhlawumbe yingoba engalutholi yini uxhaso olwanele noma ukusweleka kolwazi kuyena. Njengomuntu ovundulula abaculi kungizwisa ubuhlungu ukubona izinto zakhe zihamba ngale ndlela. Ngethemba ukuthi uzozinika isikhathi sokulungisa izinto zakhe. Ngeke ngisho okutheni nge-recording label yakhe ngoba ukube bekungesiyo kungabe akekho owazi ngoBabes," kunaba u-Arthur.
UNtokozo Mdluli owaziwa kakhulu ngelika K.O oseqede iminyaka eminingi kule ndima kwezomculo futhi owake waba yingxenye yeqembu iTeargas uthi kubalulekile ukuba izinto zenziwe kusenesikhathi. Uthi kube yiphutha ukuthi uBabes angayithatheli phezulu indaba yokuya kuma BET. Uthi mhlawumbe nokungabi nesipiliyoni esanele nakho kube nomthelela kwazise usanda kufika kwezokungcebeleka.
"Amaphutha ayenzeka kuleli bhizinisi kodwa okubalulekile wukuthi ufunde kuwo," kusho uK.O.
Uqhube wathi kwayena maningi amaphutha awenzile ngesikhathi esafika kodwa wafunda kuwo. Uthi kubalulekile ukuthi uma uthole ithuba elinjengaleli ulisebenzise ngoba kakusilo elokuyothola indondo kuphela kodwa uxhumana nabanye abantu.
"Kumele uzitshele ukuthi uyofunda. Kumele ukhumbule ukuthi laphaya awaziwa, kumele uzithobe ungayi ngobuso kodwa uqoqe yonke iminingwane. Uhlala eduze kwabantu abafana noNicki Minaj. Ngeke wazi ukuthi ukuhlala eduze kwabo kungakulethela ithuba elinjani. Kumele ukhumbule ukuthi kawuyele ukuyothola i-award kuphela kodwa uyokwakha nobuhlobo," kuchaza uK.O.
Ngesikhathi uK.O eseseqenjini i-Teargas bathole ithuba lokuya kulo mcimbi ngowezi-2011. Uthi kubasizile ukuthi balungise izinto kusenesikhathi.
"Ngingumlandeli kaBabes, ngingathanda ukumbona ekhula futhi unabalandeli. Kungayibhadi ukumbona efadalala kwezomculo," kuphetha uK.O.
UDJ Bongs uthi uBabes Wodumo udinga umuntu ozomeseka.
"Ukube bekuyimina bengingeke ngiyeke ithuba elinje. Kodwa-ke udlule kwisteji esisifikelayo sonke uma sisafika kulo mkhakha. Bekumele i-recording label imlungisele yonke into kusenesikhathi," kusho yena.
- Selokhu engenile kulo mkhakha ziningi izigameko esezimehlele uBabes. Kuzokhumbuleka ukuthi kudumale abaningi ngokungaphumeleli kwakhe emicimbini yokuhlukanisa unyaka abeqashwe ukuyonandisa kuyo, ebhekwe ngabomvu ngabalandeli. Imbangela yokungaphumeleli kwakhe kuleyo micimbi kube yikho belu ukungahleleki kwezinto okudale ukuba agcine evaleleke emngceleni ohlukanisa iSwaziland neNingizimu Afrika, walala lapho kwaze kwasa ekuseni.
- Kuzokhumbuleka futhi ukuthi kuke kwanemibiko yokuthi ngesinye isikhathi uyehluleka wukufika kwezinye iziteshi zemisakazo ezisuke zifuna ukuba nengxoxo naye emoyeni.
- Ube ngundabamlonyeni futhi ngenyanga edlule ngenkulumo ayenze esidlangalaleni noMampintsha ngemuva kokungatholi indondo emcintiswaneni wama-SAMA. Usole abahleli balo mcimbi ngokuthi bayagwazelwa, yena akawinanga ngoba engagwazanga.
- Ngemuva komcimbi wamaMetro, kusuke okukhulu ukukhuluma futhi nakhona, kukhonondwa ngokuthi uBabes urojiwe, bekufanele awine indondo. Uze wesekwa ngabanye abaculi, bathi impela kudlalwe ngaye, abanye baze basabisa ngokuwaduba.
- Uke wasematheni futhi ngemuva komcimbi abeqashwe ukuyonandisa kuwo iBuyelekhaya Music Festival, obuse-East London ngoZibandlela (December). Ungene esteji wavele wangenza adume ngazo, okuwumdanso awushaya aze abuye phansi. Ungene esteji wavele wazihambela nje. Kubikwe ukushayisana okube phakathi kwakhe nabahleli bomcimbi.